Wakiilka Mohamed Salah Oo Jawaab Ka Soo Bixiyay Dalabkii Real Madrid Iyo Sheekadii Soo Baxday. - Gool24.Net
Wakiilka Mohamed Salah Oo Jawaab Ka Soo Bixiyay Dalabkii Real Madrid Iyo Sheekadii Soo Baxday.
Waxaanu shalay idiin soo gudbinay waraysi uu bixiyay caawiyihii tababaraha xulka qaranka Masar ee Hany Ramzy kaas oo shaaciyay in Mohamed Salah uu dalab rasmi ah oo wanaagsan uu ka helay Real Madrid.
Tababare ku xigeenkii xulka Masar ee Hany Ramzy ayaa shaaciyay in Mohamed Salah uu isaga iyo macalinkii xulka Masar ee Hector Cuper uu kala tashaday dalabkii ay Real Madrid miiska u soo saartay.
Laakiin wakiilka Mohamed Salah ee Ramy Abbas Issa ayaa hadda soo bixiyay jawaabtii laga sugayay wuxuuna gabi ahaanba beeniyay in Salah uu wax wada xaajood ah la yeeshay maamulka kooxda Real Madrid.
Marka hore aan dib idiin xusuusiyo waraysigii uu caawiyihii xulka Masar ee Hany Ramzy uu ku shaaciyay dalabka Mohamed Salah ka helay Real Madrid.
Caawiyihii xulka Masar ee Hany Ramzy oo soo bandhigay dalabkii uu sheegay in Mohamed Salah ka helay Real Madrid ayuu ku yidhi: “Markii aan la shaqaynayay Hector Cuper, waxaanu tababar ku qaadanaynay xarun ku taal Switzerland. Waxaan la hadlayay Salah wuxuuna ii sheegay in Real Madrid ay isaga u soo dirtay dalab”.
Hany Ramzy oo sharaxayay noocii uu dalabku ahaa iyo Salah uu isaga iyo macalinkiisii Cuper uu kala tashaday ayaa yidhi: “Dalabku xaqiiqdii waxa uu ahaa mid fiican, laakiin waxa uu nagala xaajooday aniga iyo Mr Cuper , wuxuuna go’aansaday in uu iska sii joogo Liverpool, sababtoo ah halkaas ayuu raaxo ku dareemayay”.
Laakiin wakiilka Mohamed Salah ayaa gabi ahaanba ganafka ku dhuftay sheegashada caawiyihii xulka Masar ee Hany Ramzy wuxuuna wakiila Salah ee Ramy Abbas Issa uu qoraal twitterka ku shaaciyay in warkaasi aanu ahayn mid jiray.
Wakiilka Salah ee Ramy Abbas Issa ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray: “Mohamed marnaba wax qorshihiisa waayihiisa ciyaareed ku saabsan kalamuu hadal tababare hore oo kasta!“.
Caawiyihii hore ee xulka Masar ee Hany Ramzy ayaa waqtiga uu sheegay in Mohamed Salah uu dalabka wayn ka helay Real Madrid ay ku beegnayd bishii March 2018 kii waana dhawr bilood ka hor waqtigii uu Salah kooxda Madrid kaga hor yimid finalkii Champions League.
Laakiin hadalka wakiilka Salah ee Abbas Issa ayaa meesha ka saaray in gabi ahaanba uu Salah qorshihiisa uu kala hadlay tababarayaasha xulkiisa Masar.
Mohamed Salah ayaa Liverpool ku soo qaatay saddex xili ciyaareed inkasta oo aanu wali kan dhamaysan wuxuuna ku soo dhaliyay 91 gool kadib markii uu saftay 144 kulan.
Mohamed Salah ayaa xagaagii la soo dhaafay si xoogan loola xidhiidhinayay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona laakiin waxa uu ku sii nagaaday Liverpool halkaas oo uu markale isku soo muujiyay.